Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Italy UJorginho Ingane Yokuxoxa Kwamanje Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Jorge". Indaba yethu ye-Jorginho yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela esikhathini sokubuntana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi wayengumngane wokuqala we-Maurizio Sarri lapho ejoyina I-Chelsea FC ehlobo lika-2018. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abazi okuningi ngoJoorgeho's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UJorginho Ingane Yengane Eningi I-Untold Biography Imininingwane -Isiqalo sokuphila
Ukuqala, igama lakhe eligcwele liyi UJorge Luiz Frello Filho. UJorginho wazalwa ngosuku luka-20th kaDisemba 1991 kunina, uMaria Tereza (owayengumdlali webhola lezemidlalo engumfana osekuqaleni) kanye nobaba engaziwa esifundazweni saseSanta Catarina, eBrazil.
Isimemezelo Ngaphambi Kokuzalwa Kwakhe: Ngaphambi kokuba uJorginho azalwe, unina uMaria wathembisa ukuthi uma ebeletha umfana, uzokwenza noma yini ukuqinisekisa ukuthi ingane iba ngumdlali wezemidlalo. Lawo mazwi avela ebuhlungu nokucasuka kuMaria owake wayenomsebenzi webhola ongagcwaliseki owaphela ezingeni lika-amateur. Bheka, zonke izinto zalingana, wabeletha uJorginho esazi namhlanje.
Growing Up: UJorginho wakhula nabazali bakhe esangweni lase-Imbituba, idolobha elisogwini eningizimu yeBrazil. Ubaba wakhe owaziwayo wayaziwa ukuthi unzima kakhulu kuwo wonke umqondo wegama. Lapho eneminyaka eyisithupha ubudala, uJorginho omncane wabona abazali bakhe behlala bebhekene nezimpikiswano zomshado ezaholela ekuhlukaniseni.
Ngezinye izikhathi, ubaba ngesibindi waphuma emndenini wamshiya uJorginho omncane nonina ukuba baqhubeke bephila ngokwabo, bengenakho imali.
Ngokubuhlungu, Noma yimuphi umntwana oye waphila ngokuphumula komzali uzokwazi kahle ubuhlungu obungokomzwelo obungabangela.
Ngokuba uJorginho omncane, ebona abazali bakhe behlukanisile, belimaza imiphumela yengqondo, lokhu wayebekezelele kulo lonke ingxenye yokugcina yobusheni bakhe.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuthutha nokuqala Kokuqala
Ngemuva kwesahlukaniso, unina kaJorginho wabhekana nabazali bakhe e-Italy abameluleka ukuba asuke eBrazil eya e-Italy nendodana yakhe. Lapho eneminyaka engu-6, ngonyaka we-1997, uJorginho wathuthela eVerona, enyakatho ye-Italy nonina.
Ngesikhathi e-Italy, unina kaJorginho wathola umsebenzi. Wachitha isikhathi esiningi sosuku lwakhe esebenza njengehlanzekile ukubeka ukudla etafuleni futhi uthole imali eyanele. Ngenhloso yokuqala ukugcwalisa isithembiso sakhe, ingxenye yalezi zimali yayisetshenziswa ekuthengeni indodana yakhe ethandekayo ibhola. Ngezansi ibhola lokuqala likaJorginho elithengwa ngokushesha lapho efunda ukuhamba.
Njengoba uJorginho ebeka;
Kwakungekho amathoyizi noma imidlalo lapho ngisemncane, nje ibhola. TI-rue engenalutho eyabangelwa ukungabi khona kukababa kwaphela lapho kunezinyawo ezinyawo zami.
Ngenhloso yokuqala ukuhlela indodana yakhe, umama kaJorginho wathenga izidakamizwa zendodana yakhe nezinye izesekeli zebhola. Lokhu kwanciphisa intshisekelo yakhe yebhola ngokuholela ekubeni abhalise iqembu leqembu lentsha yendawo (okufanekiselwe ngezansi) owamnika ithuba lokubonisa ithalenta lakhe.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuqeqeshwa KwamaMama
UJorginho ubona umama wakhe njengomuntu oyedwa emhlabeni ozuza kakhulu abaqeqeshi abangamakhulu ayisishiyagalolunye. Njengengane encane, uJorginho wayexhomeke ekutheni amasu omnakekeli webhola wezinyawo zakhe angaphezu kwabaqeqeshi bakhe. Ngeke abe ngumdlali webhola lezinyawo ngaphandle kwakhe ongenalo nje kuphela, kodwa abangane bakhe (okufanekiselwa ngezansi) ngothando lomdlalo. Emuva kwalokho, uMaria Tereza Freitas wenza isikhathi sokuqeqesha udoti indodana yakhe uJorginho othanda ukuthathwa ngabangane.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Uhlelo lwebhola
Ukuphila kukaJorginho kwashintsha eminyakeni embalwa kamuva ngemuva kokuthi athandwe phakathi kwabalandeli ababazi okuningi ngomthelela wakhe wamama emsebenzini wakhe wokuqala. Naphezu kwalokho, walinda isikhathi esifanele ekugcineni.
Usuku olulindeleke kakhulu lwafika lapho iqembu le Amabhizinisi abathandi bebhola lase-Italy wanquma ukwakha iphrojekthi yebhola eyayihlose ukugqugquzela ibhola lezintsha eNyakatho Italy.
Abamabhizinisi bathola imali engakahleleki ekusunguleni isikole sebhola eliphakathi kwe-180 km ukusuka emzini kaJorginho. Unina kaJorginho waqinisekisa indodana yakhe ukuthi ibhalise ukuze abe nethuba elingcono eYurophu.
UJorginho oboniswe ngezansi wayephakathi kwabafana baka-50 abahlukaniswe nemindeni yabo njengoba bekhethiwe ukuba yingxenye yomdlalo webhola
Lapho eneminyaka eyi-13, wathola ikhokhelo lakhe lokuqala ngeviki elaligijima ngamehlo akhe. Bobabili uJorginho nonina baboniswa ngezansi begubha inkontileka yakhe yokuqala yentsha lapho ehola khona nje € 18 ngesonto.
UJorginho wasebenzisa ingxenye enkulu ye-€ 18 yakhe ngeviki imali yokuxhumana nomama wakhe njengoba ebuyela esikoleni sakhe sokuqeqesha. Ngaleso sikhathi, iqembu lakhe lentsha lalikude kakhulu nomuzi wakhe. KuJorginho, inkumbulo yokuthi kufanele ihambe amakhilomitha angu-180 kude nomama wayo isamcasula namuhla. Enkulumweni yamuva, wathi;
"Uma ngikhuluma ngakho, ngizizwa ngiphunga emqaleni. Ngaphandle kwe-€ 18, ngasebenzisa ama-euro amahlanu ngesikweletu samaselula esasetshenziswa ukukhuluma nomndeni wami. Kwakufana naleso sonyaka nonyaka.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukwandisa ukuqeqeshwa kwezilwandle nomama
Njengoba uJorginho eseqedile umsebenzi wakhe wobusha, waya ekhaya ngesimemo sokuba umama wakhe aqhubekele phambili ekuqeqesheni eBrazil yaseBrazil. Lokhu kwakuhloswe ukumlungiselela ukunikezwa kwenkontileka evela kumaqembu amakhulu.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Umgwaqo oDumela
Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba uJorginho athole inkontileka yentsha eHellas Verona. Ngemuva kokuthola, leli qembu lamnika ukudla okuyisisekelo kanye nophahla phezu kwekhanda lakhe. UJorginho wasabela ngokushesha ngesimo esihle. Njengomfana othobekile, ikhono lakhe lokubhekana nodumo laliqondana ngokuqondile nendlela ayephatha ngayo ibhola.
Ngemva kokushiya ukudlala i-AC Sambonifacese ngenkokhelo yonyaka. UJorginho ubuyele emuva njengoba ehola iqembu lakhe ekukhuthazeni uSerie A. Lokhu kwaholela ekuthatheni okuvela kuNapoli lapho aqhubeka khona esayina isivumelwano ngaphansi komphathi, URafael Benítez.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphakama Ekudumeni
E-Napoli, uJorginho akazange akhanyise kuze kube sekupheleni konyaka nonyaka owodwa ngemuva kokubonga indoda eyodwa okuthiwa UMaurizio Sarri ngubani owayesebenza kuleli qembu futhi wavusa i-monster kuye.
Indlela ifomu laKhe elafunyanwa ngayo nguSarri: Ngemuva kokuqeqesha kwakhe okokuqala, uMaurizio Sarri wathola uJorginho ukuba abe umdlali wezobuchwepheshe ongacabanga ngokushesha kunanoma ubani omunye eqenjini. Ngokuvumelana ne UMaurizio Sarri;
Ngabona umsizi omkhulu. Omunye onombono ongavamile, ohlakaniphile nombono wendawo. UJorginho unezinto ezikhethekile. Ubona okungaphezu kwamanye.
Ehlobo lika-2018, u-Maurizio Sarri washiya uNapoli ku-Chelsea. Ngokumangalisa, uJorginho wabuye wavuma ngokudluliselwa ukuhlangana ngokushesha nomqeqeshi wakhe wangaphambili UMaurizio Sarri ngemuva kokuqashwa njengomphathi we-Chelsea ehlobo lika-2018. Ngezansi isithombe sabo bobabili abangane.
Njengoba sibhala, unina, uMaria manje ungowesifazane ojabule kakhulu emhlabeni emva kokugcwalisa izithembiso azenzile yena. Namuhla, usula izinyembezi njengoba ebona indodana yakhe isenzo njengoba edlala ku-Premier League. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Jorginho Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kukaJorginho ophumelele kakhulu, kukhona intombi ethakazelisayo kamuva eyaba ngowesifazane. Ngaphandle komama wakhe, uJorginho njengamanje u-Natalia njengethando lokuphila kwakhe.
Bobabili, uJorginho noNatalia babusiswe ngendodana okuthiwa uVitor, okwenza isimo sokuzilibazisa senze abazali bajabule kakhulu futhi bangakhathazeki kakhulu ngenxa yezinyoni zezimbali.
Njengoba kubonakala esithombeni esingezansi, kuyindlela yokuphila kaJorginho emkhatsini wokwakha ngempela isithombe sakhe. Ungumuntu omndeni omuhle obeka kuqala umkakhe nezingane zakhe kuqala.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Jorginho Ingane Yendaba Yethu Ngokungeyona Inkulumo Yezinguquko ze-Untold. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Federico Chiesa Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Claudio Marchiso Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Mario Balotelli Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso